Antenimierempirenena: hanolotra praiminisitra ny depiote maro anisa | NewsMada
Antenimierempirenena: hanolotra praiminisitra ny depiote maro anisa
Efa nasian’ny mpahay lalàna fanazavana teto ity; na izany aza, iverenana ihany: iza ny manolotra praiminisitra hotendren’ny filoha vaovao ny Repoblika? Araka ny And. 54 amin’ny lalàmpanorenana: ny filohan’ny Repoblika no manendry ny praiminisitra araka ny tolotry ny antoko na vondrona antoko maro anisa ao amin’ny Antenimierampirenena.
Hiandry ny fifidianana depiote vaovao ve vao hanolotra ny ho praiminisitra ny vondrona na antoko manana ny maro anisa amin’ny fifidianana eo anivon’ny Antenimierampirenena ? Raha ny tolo-kevitry ny Ceni ho an’ny governemanta, amin’ny 20 marsa no tokony hanaovana ny fifidianana depiote. Nefa tsy maintsy hahemotra izany fa tsy voahaja ny voalazan’ny lalàna, 90 andro alohan’ny fifidianana ny fihaikana mpifidy: tokony ho tamin’ny 20 desambra 2018 izany.
Hametra-pialana ny governemanta amin’izao
Etsy andaniny, mametra-pialana avy hatrany ny governemanta amin’izao fotoana izao, raha vao vita fianianana ny filoha vaovao. Amin’ny 19 janoary izany. Raha hiandry ny fifidianana depiote ny fanolorana sy fanendrena praiminisitra vaovao, mikatso eo ny raharaham-pirenena: tsy afa-miasa ny fahefana mpanatanteraka. Fahabangana eo amin’ny andrimpanjakana izany. Na ahoana na ahoana, tsy maintsy atrehina ny hisian’ny fitohizana sy ny fampandehanaa ny raharaham-panjakana.
Izay no mahatonga ny hoe ny antoko na vondrona politika manana ny maro anisa amin’izao eo anivon’ny Antenimierampirenena ihany aloha no mety hanolotra praiminisitra, araka ny And. 54 amin’ny lalàmpanorenana. Amin’ny lafiny iray, tombondahiny politika ho an’ny filoha vaovao ny Repoblika rahateo izany: ny vondrona Mapar no hanolotra izany. Toy ny tamin’ny fanolorana praiminisitra farany teo, tamin’ny fananganana ny governementan’ny marimaritra iraisana.
Mety mbola hitsimbadika tanteraka ny raharaha amin’izany rehetra izany, raha misy, ohatra, ny fanitsiana na fanovana lalàmpanorenana? Ho hita eo…